Kuita BYOD Policy muBasa Kubva Kumba Era - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Mumamiriro ezvinhu aripo, denda rakatimanikidza kugara mudzimba dzedu uye kushanda kubva mudzimba dzedu. Masangano mazhinji pasi rese akatarisana nedambudziko iri, uye ari kuchinjira kunzira itsva iyi yekushanda ari kumba kuti ave nechokwadi chekuti bhizimisi anoramba achimhanya. Uye zvino mamiriro ezvinhu aya haaratidzi kuva ari nani nokukurumidza. Tingangove tichigamuchira chinzvimbo ichi uye kuramba tichishanda mudzimba dzedu kwenguva yakati rebei.
Kuchinja uku kwakaitika nekukurumidza zvekuti masangano mazhinji akange asina zvivakwa zvekuenda kure nekukasira uku. Masangano mazhinji aifanira kuita mutemo unouya neChako Chako Cevices (BYOD) kushandisa midziyo yavo yemagetsi senge. famba mafoni, mahwendefa, uye malaptops ebasa rehunyanzvi.
BYOD inoderedza kutsamira kwevashandi pakambani uye inovapa rusununguko rwekushanda. Muchiitiko chazvino, kuchinjika ndiyo kiyi yekubudirira bhizimisi.
Kana vashandi vanoshanda pamidziyo yekambani, saka pane zvimwe zvinorambidzwa pakubhurawuza Internet. Izvi zvinochengeta vashandi kure nemaitiro matsva ekugadzirisa matambudziko. Asi kana vashandi vakashanda pamidziyo yavo, vane rusununguko rwekutarisa chero chavanoda pane Internet. Saka vashandi vanogona kudzidza unyanzvi hutsva uye nzira dzekugadzirisa matambudziko, izvo zvichawedzera kubudirira.
Nezvakanaka zvese zvekushandisa BYOD, pane zvakasiyana matambudziko zvakare kune BYOD, asi izvi matambudziko inogona kukurirwa nekodzero famba mudziyo manejimendi (MDM) mhinduro. Heano mamwe acho matambudziko uye iyo (MDM) mhinduro yavo:
zhinji vakakwanisa kupa vanopa chengeta aya matambudziko eIT, saka haufanirwe kunetseka nezve chero chinhu. Aya MSPs anokupa iwe akasarudzika IT masevhisi, uye iwe unogona kutarisa pakuvandudza yako bhizimisi.
Nezvishandiso izvi zvakawanda zvinomhanya munzvimbo dzakasiyana uye pamaOS akasiyana siyana zvinogadzira dambudziko rekudonha kwedata. Midziyo iyi inofanirwa kuchengetedzwa kubva pakuwana chero vashandisi vasina mvumo. Izvo zvakakosha kuti uve nechokwadi che data chibatiso yevashandi vese nevekambani, ichipa kuvanzika kwevashandisi. Kana iyo data ikaburitswa, zvino ichakukonzeresa kukuvadza kwakawanda.
Iyi dambudziko re data chibatiso inogona kugadziriswa nekugadzira mudziyo wakavanzika mukati memudziyo wevashandi. Wese mushandi anogona kuchengeta iyo data yekambani mumudziyo iwoyo umo inogona kuchengetedzwa.
Asi nerubatsiro rweremote chibatiso mirairo, unogona kuteedzera zvishandiso izvi uye kukiya kana kudzima iyo data. Kana chero mudziyo ukarasika, unogona kumaka iyo chaiyo mudziyo se 'yakarasika' uye kuwedzera zviratidziro zvavo.
Iko hakuna dzimwe sarudzo kwatiri kunze kwekugamuchira mamiriro atiri uye kuzvibata nazvo. Shanda kubva kumba akapa chibatiso kuvanhu vanobva mudenda iri, asi rine raro matambudziko zvinoda kugadziriswa. The Mutemo we BYOD inogona kubatsira panguva iripo kana ichiitwa nenzira kwayo. Nerubatsiro rwe Mutemo we BYOD, bhizimisi pasi rose tinogona kufamba zvakanaka isu basa pamba.